सप्तरी स्टारकालागि १५ कलाकार फाइनल प्रवेश - News Today
in: मनोरञ्जन, समाचार, स्थानिय
बिरेन्द्र बजार,३ फागुन । थारु सुपर फिल्म्स् प्रा.लि.द्वारा आयोजित सप्तरी स्टार नृत्य प्रतियोगिताको फाइनल राउण्डमा १५ जाना कलाकारहरु प्रवेश गरेका छन् ।
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका ११ भुवनपटीमा शनिबार सम्पन्न सप्तरी स्टार छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलबाट उनीहरु फाईनलमा प्रवेश गरेको हो । भुवनदास युवा क्लव भुवनपटी र थुमकी सामुदायिक बन उपभोक्त समितिको सहयोगमा लबली पार्कमा कार्यक्रम आयोजना भएको थियोे ।
शुक्रबारदेखि शुरु भएको प्रतियोगितामा सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिकाका प्रतिभा चौधरी, पुजा चौधरी, किरण श्रेष्ठ, कञ्चरुप नगरपालिकाका आर्यन चौधरी, सुजाता अलि, सप्तकोसी नगरपालिकाका अञ्जली चौधरी, राजविराज नगरपालिकाका बिबेक यादव, खडक नगरपालिकाका संजय कुमार चौधरी, अग्निसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका टेक नारायण चौधरी सप्तरी स्टार नृत्य प्रतियोगिताको फाईनलमा प्रवेश गरे ।
यसैगरी मोरङ्ग बिराटनगर उपमहानगरपालिकाका वर्षा सिंजाली मगर, उदयपुरको एलिसा चौधरी, स्वस्तिका चौधरी, विपना चौधरी, जिबेश चौधरी र सिराहा लहानका राकेश गिरी, सप्तरी स्टारको फाइनलमा प्रदेश गरे ।
यसअघि उदयपुरमा सम्पन्न पहिलो सप्तरी स्टारका लागि ६० जना सेमिफाइनलका लागि छनौट भएका थिए । सेमिफाइनलमा फिल्म डा. कृष्णा चौधरी, किशोर चौधरी, सुरेश चौधरी र भगवती चौधरीले निर्णायक (जर्ज)को भुमिका निर्वाह गरेका थिए । फाईनलमा प्रवेश गर्ने कलाकारहरुलाई कञ्चनरुप नगरपालिकाकाका प्रमुख वसन्त मिश्रा र गायक तथा रचनाकार मुकेश कुमार चौधरीले फाईनलका लागि प्रवेश पत्र प्रदान गरे ।
सेमिफाइनल छनौट भएका ६० जना प्रतियोगी मध्येबाट १५ जना फाईनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको थारु सुपर फिल्मका सुरेश चौधरीले जानकारी दिए । सप्तरी स्टार छनौट नृत्य प्रतियोगिताको फाईनल फागुन मशान्त भित्र सप्तरीको अग्निसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका थारु भिलेज मोहुलीमा आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ । सप्तरी स्टारले नगद ५१ हजार, शिल्ड, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन भने थारु सुपर फिल्म प्रा. लि . को मुख्य अभिनेता बन्नेछ्न ।
Previous : जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्ध सख्त घाइते
Next : जेसीजद्वारा ‘प्रि–ईन्डक्सन एवम् लोम अफिसर्स’ तालिम